5 Famous Film Izindawo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Famous Film Izindawo EYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/01/2021)
Europe uphefumulela abaculi kanye nabenzi bamabhayisikobho ezivela emhlabeni wonke, ngakho akumangalisi ukuthi uheha abenzi ifilimu ngokufanayo! Thola 5 Famous Film Izindawo e-Europe futhi ukubhuka emaholide akho futhi imisebenzi ukuba Gxila amafilimu eziyizintandokazi zakho kuze kube iholidi ngaphambi ephelele ne European Kuhle Izindawo.
Rail transport is the most environment friendly way to travel. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Londoloza Isitimela I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
1. Famous Film Izindawo EYurophu: Notting Hill, London, UK
Khumbula Hugh Ikunikeza amehlo blue film Notting Hill? Thola Notting Hill, omunye London kakhulu izindawo ezinhle nekhaya kuya kakhulu quintessentially British rom-com. Noma yimuphi ukubukela le filimu bengayi usizo kodwa bakwenza uzizwe ungasile kancane kangcono ... Ingxenye best mayelana Notting Hill wukuthi ingxenye enkulu yayo yathathwa enkabeni London! Lokhu kusho ukuthi ungavakashela eziningi izindawo yisakhiwo sodumo kuboniswe movie!
Esikhathini izigcawu ukuvulwa, Hugh Grants uhlamvu, William Thacker uhamba Portobello Road Market. Lokhu abadumile emakethe izwe kuwufanele ukuvakashelwa hhayi kuphela ngoba ingenye yisakhiwo sodumo kakhulu Notting Hill ukuqopha Izindawo, kodwa ngenxa emakethe ngokwalo nje enhle egcwele quirky kwakudala elinde nje ukuze kutholakale.
Olandelayo, sincoma ukuthi inhloko phezu kwazo ukuze Wills Bookshop, 142 Portobello Road. I lovely kancane sezincwadi okungewakho Will ku amafilimu sise 142 Portobello Road. Ngesikhathi ukuqopha, kwaba i esitolo Antique. Namuhla, ikheli iyikhaya isitolo izicathulo. Kuthiwa i-eseduze sezincwadi ngegama I-Travel Bookshop ezozinza 13-15 Blenheim Vala kwaba ugqozi amafilimu esitolo.
2. u-Harry Potter, Alnwick Castle, UK
Lokhu yisakhiwo sodumo 1,000 umnyaka owodwa inqaba ephakathi kuyinto Intandokazi umkhakha ifilimu, yingakho sasingakwazi nhlobo ukuphumela ngaphandle off yethu 5 Famous Film Izindawo e-Europe uhlu. Idume kakhulu njengoba indawo Hogwarts e Harry Potter. Alnwick Castle akuyona kuphela omunye izinqaba ngobukhulu ohlala eNgilandi 1,000 ubudala, kodwa ubuye into inkanyezi movie kwesokudla ayo!
Lokhu castle olunothile ingenye yisakhiwo sodumo kakhulu eBrithani, kokuba babonakala kumafilimu adumile kanye nemidlalo yethelevishini efana Elizabeth, Robin Hood: ISikhulu Amasela, le Downton Abbey ekhethekile Christmas, neqhaza layo edume kakhulu njengoba Hogwarts School of Ubuthakathi futhi wizardry yokuqala emibili u-Harry Potter amafilimu.
Kwaba ku emagcekeni ale nqaba ukuthi Harry kwadingeka Quidditch kwesifundo sokuqala (enqabeni manje Sebawoti ukuqeqeshwa Broomstick kulo nezinyanga zasehlobo) futhi endaweni lapho Weasleys flying ukuphahlazeka Ford Anglia lawela phezu ngosuku lokuqala esikoleni.
Ngaphandle forays yayo ezikrinini ezikulu nezincani, enqabeni omangalisayo Ubuye eside futhi umlando ocebile. It lamiswao emhlabeni 1096 futhi itholakala County English Northumberland. Namuhla-ke iyikhaya uMbusi Northumberland nomkhaya wakhe futhi enqabeni ngobukhulu ohlala eNgilandi ngemuva Windsor Castle.
3. Famous Film Izindawo EYurophu: Hamlet, Dunnottar Castle, Scotland
Ngokwazi izinqaba uhambe, kunzima ukucabanga endaweni eyihlane ngaphezulu futhi amadlingozi kuka Dunnottar. Mhlawumbe ngokusizwa isikhundla kakhulu kuyo kuzo zonke izinqaba Scottish, lena kuhlezi siqu eweni inhlonhlo yayo endleleni eya Aberdeen, bavikela nxazonke by emvelo. Kuyinto Yebo futhi idume idolo Princess Meridas ekhaya e-Disney Pixars Brave futhi kabili for Elsinore e Franco Zeffirellis Hamlet!
indawo ezinhlwini zayo njengomunye wezinye kuphi esimangalisa kunazo futhi uthola ithuba ukuzitika amehlo akho amanye ogwini yesiteleka kakhulu eScotland. Umoya ishanelwe Grassland, ezingena amawa, futhi amagagasi ingazigingqagingqi bonke bebuthana kwelinye okwasemuva romantic kakhulu.
Dunnottar inikeza i siqonde castle izivikelo futhi umthamo omuhle ezinganekwaneni nemikarisomraro. Whigs Vault uzokwenza izinwele zakho ukuma ekugcineni njengoba kuzoba njalo esontweni (manje sekonakele) kushiswa ngu noWilliam Wallace.
Nakuba Dunnottar liyakhula ukuthandwa, akusiyo enye izinqaba Scottish matasa nakakhulu. plus, lingakanani izindlela ungakwazi kalula uthole kude izixuku futhi ujabulele indawo eyingqayizivele ekuyo cishe uwedwa. Libuye libe ephelele stop ngesisekelo Angus Umzila Coastal, uhambo ebabazekayo ngempela Scottish umgwaqo.
Lapho ucabanga Paris, France, wena ngokuzenzakalelayo cabanga Eiffel Tower. Futhi kungani ongayikuyibamba? Kuyinto enhle, futhi inhle, kodwa siye zonke nikubona ayinkulungwane izikhathi zonke ngifaka, amaphosta, ezithengiswayo nawo izindaba izithombe ngoba sasihlale izingane. Kodwa kukhona okuthile ngempela kuphole emi nje amatshe aphonse kusukela Eiffel: i-Inception kwebhuloho.
Pont de Bir Hakeim kuyinto elihlanganisa ukweqa eMfuleni iSeine Paris. Yakhelwe engaphezu kweyikhulu edlule ngobuqotho ukhonza njengelungu iphuzu eyaqala ezibukweni lomfula wakudala ukuze abendawo, kodwa 2010 kwaba weqiniso isilomo. Kulapho Christopher Nolan kufika namatilosi akhe, kufaka Leonardo DiCaprio, Ellen Ikhasi, futhi Joseph Gordon Levitt.
Ngo 2010 into imilingo kwenzeka kule kwebhuloho. Esikhathini izigcawu ukuvulwa, Ellen amakhasi uhlamvu Ariadne ifunda ukwakha amaphupho.
5. Famous Film Izindawo EYurophu: Ukuphila amahle, Arezzo, Italy
Le movie namanje uletha izinyembezi ukuba iso lami lapho ngicabanga ngakho. Ngibuke lokhu ifilimu ezidumile esikoleni eminyakeni eminingi edlule, futhi akazange ashiye inkumbulo yami. Lokhu Yingakho ngiye mathupha gone ukubona lokhu abadumile ifilimu indawo ngokwami! Roberto Benigni 1997 Oscar Yokuwina La Vita e Bella (Kumnandi ukuphila) iyingqayizivele! Setha e WWII, ke isitshela indaba indoda ethile engumJuda Italy okuthiwa Guido Orefice. Ahlangana futhi owayo uthandana ne Dora enhle futhi abe nendodana, uJoshuwa, ndawonye.
Le ndaba ikhuluma Guidos ngomkhaya nendlela ezimpilweni zabo bese walenqaba sibheke lapho ezithathwe ekamu lokuhlushwa. Ngesikhathi elapho, ukuze indawo yokuhlala nendodana yakhe kusukela ezethusayo azibonayo, Guido esenza indaba yokubukisa. isikhathi yabo ekamu kumane umdlalo. Uthwebule yonkana amasethi ambalwa mhlobiso of ekuqaleni ifilimu, Nokho, iyona enhle idolobha Tuscan ka Arezzo.
Bologna to Arezzo amathikithi
Wena noma ulungela ukulanda enye yalezi movie ukubukela noma ngenxa yalokho uhlela uhambo lwakho kakade, angithi? Kungani ungenzi kokubili! qhubekela phambili phezu ukuze Londoloza Isitimela futhi ukubhuka ithikithi kumaminithi ukuze omunye 5 Famous Film Izindawo e-Europe!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Famous Film Izindawo EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel filmplaces amafilimu filmspots trainjourney Tranride